पासाङका लागि अस्पताल नै घर- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार
पासाङका लागि अस्पताल नै घर
पुस ९, २०७६ राजेन्द्र मानन्धर
(दोलखा) — हिँड्दाहिँड्दै सडकमाथिबाट पल्टिँदै आएको ढुंगा पासाङ तामाङको देब्रे तिघ्रामा बजारियो । नौ वर्षीय उनी सडकमै ढले । लामाबगर छेछ्यौतबाट गम्भीर अवस्थामा उनलाई चरिकोट अस्पताल ल्याइयो । करिब दुई वर्षअघिको उक्त दुर्घटनापछि पासाङ घर फर्किएनन्, अस्पताल उनका लागि घरजस्तै बनेको छ । उनी एक्लै अस्पतालको बेडमा बस्छन् । नर्सहरूसँगै खान्छन् । रमाउँछन् ।
दुर्घटनापछि अहिले उनी पाचौंपटक अस्पताल आएका छन् । अस्पताल बस्दा उनले पैसा तिर्नु पर्दैन र सहजै भर्ना पाउँछन् । ‘पासाङले अस्पताललाई आफ्नै घरजस्तो ठानेका छन्,’ अस्पतालका प्रमुख डा. विनोद दंगालले भने, ‘उनका लागि अस्पतालमा सम्पूर्ण उपचारका साथै बस्ने खाने खर्च छुट छ ।’
हुन त चरिकोट अस्पतालले सबैका लागि सम्पूर्ण सेवामा छुट गरेको छ । नेपाल सरकार, न्याय हेल्थ र भीमेश्वर नगरपालिकाको संयुक्त प्रयासमा सबै सेवामा छुटको व्यवस्था भएको हो । पासाङलाई भने अझ बढी सहुलियत छ । किनकि उनका अभिभावक कुरुवा बस्दैनन् । डाक्टर र नर्सहरूले नै उनको हेरविचार गरिदिएका छन् ।
अस्पतालमा आउँदा उनको खुट्टा काट्नुपर्ने स्थितिमा थियो । ठूलो ढुंगाले लाग्दा तिघ्राको हाड, नसा र मासु छुट्टिएको थियो । घटनापछि उनलाई काठमाडौं लगिएको उनका बुबा संगते तामाङले बताए । काठमाडौंमा राखेर हड्डी, नसा र मासु जोड्ने काम भयो । ‘ऋणसहित करिब ६ लाख रुपैयाँ सकिएपछि बेचर्खी भएर चरिकोट फर्कियौं,’ आमा कमी भन्छिन् ।
पैसा अभाव भएपछि पासाङको पछिल्लो उपचार चरिकोट अस्पतालमै भइरहेको छ । ‘हड्डी विशेषज्ञ झिकाएर अप्रेसन पनि नि:शुल्क गरिरहेका छौं,’ डा. दंगालले भने, ‘अस्पतालबाट बाहिरिनेबित्तिकै गरिबीले पोषण अभावका कारण संक्रमण हुने हुँदा अस्पतालमै बसेर उपचार गर्न छुट दिइएको हो ।’
अहिले पासाङ सामान्य हिँडडुल गर्न सक्छन् । जोडिने क्रममा एउटा खुट्टा केही छोटो छ । बाबु ज्यामी काम गर्ने र आमा घरमै व्यस्त हुँदा सधैं अस्पताल बस्न भ्याउँदैनन् । ‘बाबा–आमा नभए पनि मलाई एक्लै छु जस्तो लाग्दैन । यहाँ सबैले माया गर्नुहुन्छ, मीठो खाना दिनुहन्छ,’ पासाङले भने, ‘म यहाँ एक्लै बसेर उपचार गराउन सक्छु ।’
उनी दुई कक्षामा पढ्छन् । उपचारका कारण पढाइमा त्यति ध्यान दिन पाएका छैनन् । ‘खुट्टा राम्रो होला भन्ने आसले अस्पतालबाट बाहिर जान पनि मन लाग्दैन,’ उनले सुनाए । अनमी संगीता खड्काले पासाङ लामो समयसम्म यहाँ बस्दा पनि खुसी नै रहेको बताइन् । ‘ड्युटीअनुसार पासाङलाई हामीले जे खान्छौं, त्यही दिन्छौं,’ उनले भनिन्, ‘कहिले त उनी डेढ महिनासम्म अस्पतालमै रहने गरेका छन् ।’
संक्रमणका कारण दुई महिनामा एकपटक उनको खुट्टाको शल्यक्रिया गर्ने गरिएको छ । अस्पतालमा खर्च नलागे पनि बाहिर औषधि किन्दा र आउजाउ गर्दा एक लाखजति सकिएको बुवा संगतेले बताए ।
दैनिक तीन सयजनाले जँचाउने उक्त अस्पतालमा नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गर्न अमेरिकी सहयोगमा न्याय हेल्थले वार्षिक झन्डै १३ करोड खर्च गरिरहेको छ । नेपाल सरकारले भवन, जनशक्ति, नि:शुल्क औषधि सहयोग गरिरहेको छ । भीमेश्वर नगरपालिकाले स्थानीयस्तरमा व्यवस्थापकीय सहयोग गर्दै आएको छ ।
प्रकाशित : पुस ९, २०७६ ०९:२६
राजविराज विमानस्थलमा नयाँ टर्मिनल
पुस ९, २०७६ कान्तिपुर संवाददाता
राजविराज — राजविराज विमानस्थलमा सोमबारबाट नयाँ टर्मिनल भवनबाट सेवा सुरु भएको छ । वषौंदेखि जीर्ण रहेको भवनबाट सेवा दिँदा असुविधा हुँदै आएको थियो । पछिल्लोपटक राजविराज विमानस्थलमा विमान सेवा सुरु भएपछि पुरानो भवनलाई मर्मत गरी काम चलाइएको थियो ।
करिब ३ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण भएको टर्मिनल भवनबाट सोमबारदेखि सेवा सुरु भएको राजविराज विमानस्थलका प्रमुख भीमदत्त पन्तले जानकारी दिए । नयाँ टर्मिनल भवनमा भीआईपी कक्ष, सुरक्षा जाँच कक्ष, यात्रु प्रतीक्षालय, शौचालय, स्मोक सेन्सर कक्ष छन् । ‘सेवा र सुरक्षा दुवै हिसाबले नयाँ टर्मिनल भवन आवश्यक थियो,’ पन्तले भने, ‘निर्माण भएपछि सेवा दिन सहज र सुरक्षित भएको छ ।’
टर्मिनल भवन बनेसँगै अब जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए । विमानस्थलको धावनमार्गको दायाँ र बायाँ खाली जग्गा रहनुपर्नेमा अहिले नहुँदा समस्या भइरहेको उनले बताए । ‘धावनमार्गको दायाँ र बायाँ जग्गा अधिग्रहणका लागि प्रक्रिया अघि बढिइसकेको छ,’ उनले भने । यस्तै भवन निर्माणका लागि पनि जग्गा आवश्यक रहेको उनले बताए ।
राजविराज विमानस्थलवाट अहिले श्री एयरलायन्सले साताको सोमबार, बुधबार र शुक्रबार गरी तीन दिन उडान गर्दै आएको छ । यसैबीच बुद्ध एयरले समेत आगामी फ्रेबअरी १ बाट राजविराज उडान गर्ने भएको छ । विमानस्थल प्रमुख पन्तका अनुसार बुद्धले राजविराजमा कार्यालयसमेत खोलिइसकेको तथा विमानस्थलमा पनि आवश्यक प्रक्रियाहरू पूरा गरिसकेको छ ।
बुद्धले दैनिक उडान गर्ने जनाएको छ । सप्तरी, सिरहा र उदयपुर तथा सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रका यात्रुहरूको चाप राजविराज विमानस्थलमा हुने गरेको छ । विसं २०१६ मा तत्कालीन मन्त्री गणेशमान सिंहद्वारा उदघाटन भएको केही दिनभित्रै राजविराज विमानस्थलमा विमान सेवा बन्द भएको थियो । कच्ची धावनमार्ग तथा अन्य प्राविधिक समस्याका कारण राजविराज विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन ।
पछिल्लो समय राजविराज विमानस्थलको धावनमार्ग पक्की भएपछि नियमित उडान सुरु भएको हो । एक हजार पाँच सय मिटर लामो र ३० मिटर चौडा धावनमार्ग पक्की भएको छ । यस्तै ९० मिटर लामो र ६० मिटर चौडा एप्रोन तथा १ सय १० मिटर लामो तथा २० मिटर चौडा ट्याक्सी वे कालोपत्रे भइसकेको छ ।
प्रकाशित : पुस ९, २०७६ ०९:२५